Pushkin र Lermontov नाम को संयोजन थाहा र प्रेम रूसी साहित्य सबै पाठकहरूलाई धेरै परिचित छ। यसैबीच, यो एकदम फरक कवि छ। विषयवस्तुहरू र Lyric Lermontov peculiar र अद्वितीय मनसाय यी निर्माताहरू को समानता बारे कुरा गर्न। हरेक कवि व्यक्तिगत व्यक्तित्व को रचनात्मकता छ।
एक सबै भन्दा प्रसिद्ध काम
मिखाइल Yurevich को कवितात्मक जीवनी एक समयमा थाले अलेक्जेन्डर Sergeyevich गरेनन् जब। केही दिनमा दुःखद जनवरी हजार आठ सय तीस-सातौं वर्ष, आफ्नो हात मा भनिन्छ जो थियो Lermontov छोड्दा कविता, जाने गर्न थाले "को कवि को मृत्यु मा।" एक प्रतिभा को मृत्यु, पछि यस मिति मिखाइल Yurevich एक कवितात्मक जीवनी मा घर भयो।
यस चालीस पहिलो वर्षमा त्यो एक Duel मा मर्छ। यसरी, tragically सानो यसलाई आफ्नो साहित्यिक क्यारियर थियो। यो केवल एक सानो थप चार वर्ष छ। र जहाँसम्म यो अवधि रूपमा रूसी साहित्य मा निर्माता को मूल्य गर्न disproportionate छ।
Lermontov धेरै कविता लेखे, तर आफ्नो जीवनकालमा तिनीहरूलाई को एक धेरै सानो भाग पाठक थाह भयो। यो गर्न, उहाँले आफ्नै कारण थियो। मिखाइल साहित्यिक सर्कलमा belonged भन्ने तथ्यलाई। यो कवि सबै आफ्नो जीवन आफैले राखे।
रचनात्मकता लागि, तर महिमा लागि पागल तिर्खा
उहाँले मास्को विश्वविद्यालय बोर्डिङ स्कूलमा विश्वविद्यालय मा, त्यसपछि केही समय अध्ययन र सेन्ट पीटर्सबर्ग सारियो, स्कूल गार्ड उप-ensigns र cavalry cadets प्रविष्ट गर्नुभयो। यी सबै संस्थाहरू साहित्यिक संचार को ध्यान थिए।
तर Lermontov केही समय पनि कसरी यो अवधिमा उहाँले enthusiastically र सरोष लेखे भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो क्षेत्रमा एक क्यारियर बनाउन बारेमा थिएन। कविता सयौं कविता र मिखाइल प्रकाशित गर्न प्रयास गर्न पनि छ कि नाटक सिर्जना।
बहु-faceted र प्रतिभाशाली कवि र लेखक
मिखाइल धेरै भेंट मानिस थिए। आफ्नो चित्रहरु र सुन्दर रेखाचित्र धेरै संरक्षित। उहाँले एक भेंट र musically थियो। Brilliantly पियानो, वायलिन, बांसुरी, रमणीय गीतहरू पनि बनेको संगीत आफूलाई एक गाइरहेका प्ले। र धेरै मनसाय Lyric Lermontov अक्सर एक कलाकार र संगीतकार रूपमा आफ्नो प्रतिभा प्रतिबिम्बित।
आफ्नो छवि पछि लाग्दा देख्न सक्नुहुन्छ पांडुलिपि को पृष्ठ मा कवि को कलम गरेको स्केचहरू को विचित्र श्रृंखला विचार। पार्थिव र स्वर्गीय, स्वर्गदूतीय र शैतानिक, पवित्र र निष्ठुर सामना कसरी यी तथ्याङ्कले, साथै सबै रूपमा विषयवस्तुहरू र Lermontov गरेको गीत को मनसाय देखाउँछ। यो संसारमा, सृष्टिकर्ता को प्राण अनुरूप आनन्द खोज्ने स्तब्ध, तर पत्ता लगाउन सक्दैनन्। र त्यसभन्दा मिखाइल गहिरो दु: खी थियो।
समय र मुख्य मनसाय Lyric Lermontov परिवर्तन
एक हजार आठ सय र तीस समय romanticism देखि एक प्रस्थान सम्बन्धित थिए। यो कविता विगतमा गाडेको छ, र मिखाइल, सृष्टिकर्ता रूपमा, गलत युग मा देखियो। रोमान्टिक गन्तव्यहरू Lermontov गरेको गीत अप्रचलित केही रूपमा कथित थिए। एक युग ठाउँमा यो फरक थियो।
यस कठिन समयमा र पाठकहरूलाई कवि काम सिके। आफ्नो कविता विभिन्न तरिकामा व्याख्या गरिएको छ। यो गर्न, उहाँले आफ्नै कारण थियो। मिखाइल, मात्र होइन जीवन मा तर चरम, मूल विश्वास पालना गर्ने व्यक्ति को काम मा। उदाहरणको लागि, "एक कवि को मृत्यु"। यसलाई मा आएको यस शहीद को छवि, यो पृथ्वीमा बच्न कुनै मौका छ जसले नायक पर्छ। यो कवि, सारा संसार विरुद्ध एक uncompromising संघर्ष लागि भनिन्छ जो।
तर यो मामला छैन। आफ्नो काम को बीचमा द्वारा सिकन्दरले अचाक्ली छैन ध्यान र मध्य जमीन पाउन प्रयास गरिरहेको छ। शीर्षकहरू Lermontov गरेको गीत आफूलाई र दुनिया आशाहीन शोक, भागिरहेका, लड र एकता गर्न नसक्नुको संग dissatisfaction व्यक्त। र Pushkin आधारभूत टोन - "उज्ज्वल दुःख"।
रचनात्मक व्यक्तित्व सास्ती
गीत को Lermontov को मुख्य विशेषता - मिखाइल Yurevich को लगभग सबै काम मा उपस्थित जो इन्कार एक तत्व छ। पाठक निरन्तर छ हुनुको गर्न बिल्कुल हरेक कारण प्रश्न कुनै पनि अनुरूप वा आधा-hearted समाधान गर्न सहमत गर्छ जसले एक व्यक्ति को छवि, उठ्छ।
गीत को मा पुस्ताका भाग्य Lermontov एक महत्वपूर्ण स्थान छ। विशेष torments भरिएको को नमूना काम गर्छ। अलार्म protagonist अनन्त छ। र यति सबै यी जसको लागि त्यहाँ जीवनको कुनै सकारात्मक उद्देश्य हुन सक्छ एकल व्यक्ति, द्वारा खेदो sensations, सबै आधुनिक progeny वहन।
यो पद "Duma", जो पुस्ता वर्णन सम्झन आवश्यक छ, र जो आफूलाई वास्तविक मामला संलग्न गर्न असफल भयो। कलाकृति "अनि नरमाइलो लाग्यो र दुःखी।" यो नायक को दृश्य को बिन्दु हो रूपमा केन्द्र मा आफ्नो छिमेकीको हात पेश गर्न पाउँदा खुसी हुनेछन् मानिस छ, तर उहाँले एक्लै थियो, र दुनिया राज्य को एकाकीपनको यो झूट लागि कारण। यो गीत Lermontov मा पुस्ताका भाग्य रूपमा व्यक्त गरिएको छ। जीवन भ्रम, एकाकीपनको र निर्वासनमा भरिएको छ।
कलाकारहरूको दुई पुस्तामा बीच फरक
Lermontov पुस्ता आत्मा Pushkin देखि जोडले भिन्नता थियो। एक हजार आठ सय र बीस-पाँचौं वर्षमा भयो जो Decembrist विद्रोह, बीच झूठ आउँछन्। आफ्नो हार पूर्णतया फरक वातावरण प्रबल पछि। बेपत्ता मान्छे postulates र मिखाइल Yurevich काम प्रतिबिम्बित जो अघिल्लो विरोध, एक नयाँ, स्वामित्वको।
यो धेरै स्वतन्त्रता-मायालु, तर कुनै पनि तत्काल राम्रो रूपान्तरणको लागि आशा थियो जो ज्यादातर गार्ड, पनि जवान थिए। reflectors नायक - यो विरोधको अर्को प्रकार छ। र Lermontov गरेको Lyric मा पुस्ता को भाग्य यस्तो तस्बिरहरू द्वारा disclosed थियो। उदाहरणका लागि, एक Pechorin चिरपरिचित। यो सधैं आफूलाई बचाव गर्ने नायक, त्यो संसारमा सद्भाव देख्न गर्छ, तर उनको खोज्ने र सरोष उनको लागि yearns।
जालसाजी भावना र झूट गर्न घृणित मनोवृत्ति विरुद्ध लडाई
तर अलग गीत को Lermontov कुरा अनन्त र सार्वभौमिक मा ल्यान्डमार्क र राष्ट्रिय भाग्य पुस्ता देखि। र मिखाइल Yurevich को पद को एक यी शब्दहरू फेला: "त्यहाँ मानिस, सदाको को पवित्र सन्तानको हृदयमा सत्यको भावना छ ..."। तपाईं रूसी साहित्य, ठूलो कवि र लेखक के सडक, पाठ्यक्रम, उहाँले सत्य को नयाँ पुस्ता को भावना व्यक्त गर्न सक्षम थियो छ विचार भने।
कुनै पनि falseness, एकाकीपनको पीडादायी भावना, सत्य र घृणा लागि भावुक तिर्खा शंका को र एकै समयमा प्राण, जीवन, सद्भाव एक पागल इच्छा corrodes, अद्वितीय तरिका कवि र novelist नायक को वर्ण र भाग्य प्रतिबिम्बित। जीवन र मृत्यु बीच लाइन पार गर्न गर्दा अझै पनि आफ्नो मन सम्पूर्ण संसारमा जीवित पकड गर्छन जो गीत Lermontov तस्बिरहरू को पूर्ण, सबै विषय,।
चिरपरिचित को कार्यहरूमा तस्बिरहरू
नाटक को नायक आध्यात्मिक स्वतन्त्रता र मानव संलग्नता लागि भोक "बहाना घूम्छ"। तर मानव जीवनमा असीम अविश्वास र एक हत्यारा यसलाई गर्दछ। आफूलाई नाश। मृत्यु र मुख्य रूप कविता "Mtsyri", स्वतन्त्रता को लागि आदान प्रदान गर्न स्वर्ग र सदाको लागि तयार छ।
एक "हाम्रो समय नायक" - रूसी गद्य पहिलो सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यास? कोर मान रूपमा स्वतन्त्रता बारेमा बहस, Pechorin आफूलाई सोध्छन्: "के म यो यति कदर छु?" उहाँले जवाफ देख छ तपाईं मृत्यु र दुःख छर्न वरिपरि अरूको जीवन मा intruding। दुखद एकाकीपनको र चिसो उछाल आफूलाई निन्दा गर्छ।
Fatalist जानाजानी भाग्य लोभ्याउन र जीवित रहिरहन्छ। तर यो केवल अस्थायी reprieve छ। एक "व्यापारी Kalashnikov को गीत"? आफ्नो मृत्यु को यो कविता को नायक, दाबी को सम्मान र मर्यादा व्यक्ति। कविता राष्ट्रिय मूल फर्कंदै Lermontov सरोष जीवन र मृत्युको मौलिक प्रश्नहरूको जवाफ खोजे।
स्मृति Mihaila Yurevicha Lermontova जोडिएको सबै - एक अनमोल सम्पत्ति, मात्र छैन रूसी, तर पनि सम्पूर्ण विश्व संस्कृति। को प्रतिभा को स्मृति सन्तानको हृदयमा कहिल्यै मर्नेछन्। यसलाई आफ्नो पैतृक भूमि लागि inexhaustible प्रेरणा को जीवन र प्रेममा स्रोत, विश्वास गर्दछ।
अल्फ्रेड Shkliarsky। जीवनी र लेखक को काम
अनातोली Georgievich Aleksin - परिवार पुस्तकको मास्टर।
"IFN-Lipint": समीक्षा, निर्देशन, analogs, आवेदन, मूल्य
घण्टा कति सुत्नेसमय अघि खान गर्न सक्छौं? विभिन्न मान्छे को राय
Essentuki, "Niva" (स्पा): समीक्षा, वर्णन, सुविधा र समीक्षा